दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी - Health TV Online
/ मङ्लबार, १८ चैत्र, २०७६
दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं : बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अभद्र व्यवहार गरेको उजुरीपछि प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सविन प्रधानले प्रसाईँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको पुष्टी गरे। उनले प्रसाइँलाई पक्राउ गर्न उनको भत्तपुरस्थित घरमा गएको तर उनी फेला नपरेको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले प्रसाईँले आफूविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेको र असुरिक्षत भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दिएका थिए। उनले प्रसाईँविरुद्ध अदालतमा मानहानीको पनि मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
प्रसाईँले बी एण्ड सी मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि गिरीले आफूसँग २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका छन्। उता गिरीले यो आरोप मात्र भएको बताउँदै आएका छन्। गिरीविरुद्ध प्रसाइँले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत उजुरी दिएका थिए भने गिरी अदालत गएका थिए ।
‘एसियामा कोरोना स‌क्रमण नियन्त्रण प्रयास सन्तोषजनक, तर समय लाग्छ’
स्वास्थ्यकर्मीलाई कोठा छोड्न दबाब दिए घर मालिकलाई कारबाही
नेपालमा हालसम्म १ हजार ६० जनाको कोरोना परीक्षण, ५ जना संक्रमित
पोखरामा पनि शुरु भयो कोरोना परीक्षण
कोरोना महामारीको चिन्तामा नरहेको युरोपको एउटा मात्र देश
सुर्खेतमा ल्याब मेसिन र दक्ष जनशक्ति पठाउने राज्यमन्त्री रावतको आश्वासन
लकडाउनका बेला आँखामा समस्या आए तिलगंगाका यी विशेषज्ञलाई फोन गर्न सकिने
के यौनसम्पर्क गर्दा कोरोना भाइरस सर्छ?
सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास : भ्रम बढी, सचेतना कम
के हो हाेम क्वारेन्टाइन?, किन बस्ने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा?
वेलैमा जोगाउनुस् बालबालिकाको दाँत
कोरोना भाइरस संक्रमण : मास्क कति आवश्यक?
मधुमेह भएकाले यसरी बच्नुस् कोरोना संक्रमणबाट